Usaid - Nanome fanampiana ireo distrika 4 tany amin’ny faritra Atsimo
Usaid – Nanome fanampiana ireo distrika 4 tany amin’ny faritra Atsimo
Posted on: December 15, 2020 Written by: Book News Categorized in: Malagasy
Nanatanteraka fitsidihana tany amin’ny faritra Atsimo ny Ambasadaoro Amerikana Michael Pelletier sy ny Tale Jeneralin’ny Usaid John Dunlop. Nidina ifotony izy ireo mba hanao tombana ny fizotran’ireo fanampiana izay nomena tao amin’ireo distrika 4 izay tena ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.
Ny votoatin’ny fitsidihana natao
Nihaino mivantana ny feon’ireo mponina nomena ireo fanampiana ara-tsakafo avy amin’ny governemanta Amerikana tany amin’ny distrikan’Ampanihy, Tsihombe, Ambovombe, ary Amboasary, izay notsidihana ny Ambasadaoro Michael Pelletier sy ny Tale Jeneralin’ny Usaid John Dunlop.
Notsindrian’ny Masoivoho mandritra izany ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miombon’antoka sy ny fiaraha-miasa amin’ny governemantan’i Madagasikara sy ny ireo mpiombon’antoka amin’ny fiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny faritra atsimon’ ny nosy. Ny tena votoatin’ny fihaonan’ny delegasiona notarihiny sy ireo solon-tenan’ny foibe sy tany an-toerana ary ireo solontenan’ny mpiaramiombon’antoka amin’ny Usaid izay manatanteraka ny asa fanampiana fiatrehana ny hamehana dia ny World Food Programme, ny Unicef ary ny Catholic Relief Services.
Ireo fanampiana natao ny volana Jolay sy Oktobra
Tamin’ny volana Jolay lasa teo dia nandefa fanampiana ara-tsakafo 8.330 taonina any governemanta amerikana mba hamaliana ny filàna ara-tsakafon’ireo olona maherin’ny 350.000, ka ny 20.500 amin’ireo dia vehivavy bevohoka sy mampinono avokoa. Ka tamin’ny alalan’ny Usaid no nanatanterahan’ireo an’izany.
Ny volana Oktobra indray dia nanome famantsiam-bola mitentina 2,5 tapitrisa dolara ny governemanta ho an’ny WWP sy ny Unicef mba hitsaboana ireo zaza latsaky ny 5 taona miisa 64.000 ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo.
Ireo fanampiana efa nataon’ny governemanta Amerikana teto Madagasikara
Ny governemanta Amerikana no mpamatsy lehibe indrindra fanampiana ara-tsakafo sy fitaovam-pambolena ho an’ny faritra atsimon’i Madagasikara nanomboka ny taona 2015, nanome vola mitentina 100 tapitrisa dolara ho fanampiana amin’ny hamehana ihany koa. Ity governemanta ity ihany koa dia nanampy tamin’ny fanampiana ho an’ny fampandrosoana sy fanamafisana fahaiza-manao amin’ny sehatra maro manerana ny nosy. Tamin’ny taon-dasa koa dia nanome fanampiana mitentina 114 tapitrisa dolara ny Usaid, ka ny 62 tapitrisa tamin’izany dia natao ho amin’ny sehatry ny fahasalamana, izay i Etazonia no firenena mpanome fanampiana lehibe indrindra. Ny 52 tapitrisa kosa dia nanampiana ireo tetikasa isan-karazany ho fampandrosoana ny toekarena sy ny asa, fiarovana sy fampivelarana ny harena voajanahary sy ny maha-olona, ny harena an-dranomasina sy ny ala, ary ny fampiroboroboana ny fambolena lovain-jafy sy ny fanjarian-tsakafo.
Tagged as: fanampianaavyanyivelany fanjariantsakafo governemantaamerikana unicef
Previous post Fitafi Madagasikara – Nizara fanomezana ho an’ny ankizy sahirana miisa 40 eny Antanimenakely
Next post Fitafi Moramanga – Nizara fanomezana ho an’ny tokantrano sahirana 26
0 comments on “Usaid – Nanome fanampiana ireo distrika 4 tany amin’ny faritra Atsimo” Add yours →